Hita any atsimo andrefana ny ampahany amin’ny United States, New Mexico dia fanjakana miaraka amin’ny samy teratany fomban-drazana ary koa ny mijery hatrany ny toe-karena. Ankoatra ny maro ny matihanina sy ny raharaham-barotra fahafahana, ny New Mexico dia manolotra ihany koa ny harena ara-kolontsaina sy ara-tantara ny harena izay mahatonga ity Tany ity Enchantment iray amin’ireo lehibe indrindra ny safidy ho an’ny tantaram-pitiavana niainany. Hihaona ny Angovo Nokapaina ny Iray amin’ireo zava-dehibe indrindra amin’ireo sehatra Vaovao Meksika ny toe-karena no hery. Izany dia satria ny tanin ‘ny fanjakana, dia manan-karena amin’ny fampiasàna angovo»fossiles»sy ny angovo hafa. Ny San Juan Basin-Dranomaso ny Faritra lehibe indrindra sehatry ny hita entona voajanahary ny toeram-piarovana any Etazonia New Mexico ihany koa dia ahitana arintany lehibe mipetraka eo amin’ny zorony avaratra ny Fanjakana. Sivy ampahafolon’ny famokarana herinaratra ao amin’ny Fanjakana dia avy amin’ny arintany tamin’ny zava-maniry. Betsaka ny Vaovao ao Meksika geologically-mavitrika Rocky Mountain faritra mihazona géothermie hery mety, ary paosin’ny ny Fanjakana dia mety ho rivotra fahefana fampandrosoana. Vaovao Meksika atsimo ny tany efitra atolotra ny Fanjakana ny tena mifantoka herin’ny masoandro mety. Noho izany, raha te hihaona amin’ny lehilahy manan-karena indrindra ao amin’ny fanjakana, hijery avy ho an’ny menaka nokapaina, mpanan-karena orinasa sy ny orinasa, ny mpitantana ny angovo ny orinasa tamin’ny fivoriambe foibe, ny raharaham-barotra fihaonambe na ny trano fandraisam-bahiny mihaja amin’ireo tanàna lehibe tahaka Albuquerque sy ny Santa Fe. Ny tao afovoan-tanànan’i faritra ary koa ny foibe ny fandraharahana ny distrika amin’ireo tanàna ireo no tsy maintsy ho henika mahomby matihanina sy ny mpandraharaha mifandray amin’ny ny sehatry ny angovo. Fantaro ny governemanta Federaly ry zalahy ny governemanta amin’ny fandaniana dia lehibe mpamily ny New Mexico toe-karena.
amin’ny New Mexico dolara isaky ny hetra amin’ny vola miditra voangona avy amin’ny fanjakana.
Io tahan’ny hiverina dia ambony noho ny hafa-panjakana ao amin’ny Sendikà
Ny governemanta federaly ihany koa ny lehibe mpampiasa in New Mexico manome mihoatra ny ampahefatry ny fanjakana ny asa. Ary raha ry zalahy miasa ho an’ny governemanta mety tsy hitondra an-trano ny karazana inflated paychecks fa ny orinasa honchos aza, ireo olona ireo dia miasa ao amin’ny ambony rungs matetika ny manana ny fidirana maro amin’ireo fiahiana sy tombontsoa fa mihoatra noho ny manao ho an’ny somary vitsy kokoa ny isan’ny aotra ao amin’ny isam-bolana ny karama bebe. Noho izany, raha manontany tena ianao hoe aiza ny hihaona ry zalahy ireo, ny mpivady ny hevitra dia ny hijery ny tanàna toy ny Santa Fe County an-trano New Mexico Tafika Mpiambina Nasionaly Foiben-toerany ary koa ny Rio Rancho ao Sandoval county izay ny Mpiambina Nasionaly fitaovam-piadiana mavesatra no misy.
Ankoatra ny Mpiambina Nasionaly, ny New Mexico manana New Mexico Fanjakana Hery Fiarovana
Hafa federaly ahitana fametrahana pirenena observatories sy ny teknolojia labs Los Alamos-Pirenena Laboratoara (LANL) sy Sandia-Pirenena Laboratories (SNL). SNL mitondra elektronika sy ny indostria fikarohana momba Kirtland AFB, eo amin’ny lafiny atsimo atsinanana ny Albuquerque. Ireny fotodrafitrasa ireny tafiditra koa ny bala afomanga sy ny sambon-danitra manaporofo ny antony amin’ny Fotsy-Fasika. Hafa sampan-draharaha federaly tahaka ny Valan-javaboarim-Pirenena ny asa Fanompoana, ny madagascar Ala asa Fanompoana, ary ny Etazonia Birao misahana ny Fitantanana ny Tany dia ny ampahany lehibe amin’ny fanjakana any ambanivohitra amin’ny asa fototra. SOSO-kevitra: Milionera Lalao maro tokana milionera ny olona avy any New Mexico mitady vehivavy ny daty sy ny hanambady. Lehilahy manao Fanamiana Ankoatra ny mahery federaly mpiasa, any New Mexico ianao, koa hijoro avo vintana ny fanaovana ny olom-pantatra ny manamboninahitra tao amin’ny tafika, indrindra ny Tafika an Habakabaka. Ny fanjakana tompon’ny maro telo air force toby (Kirtland Air Force Fototra, Holloman Air Force Fototra, sy Tafondro Air Force Fototra) ny fitiliana isan-karazany (Fotsy-Fasika Balafomanga isan-Karazany) sy ny tafika manaporofo ny tany sy ny manova ny toe-karazany (Fort Sambatra — McGregor isan-Karazany). Ary na dia ny miaramila karama mety tsy ho ampy ny olona ao amin’ny orinasa ny fiainana, ny fiainana perks sy ny glamour ny fanamiana dia mety ho ny koa mafy hevitra ny tia. Noho izany, ataovy ny hevitra mba hitandrina ny kalandrie ara-tsosialy maimaim-poana ho an’ny mpiandraikitra’ asa sy ara-tsosialy ny zava-niseho izay mety ho nampiantrano ao amin’ny isan-karazany New Mexico Air Force toby avy ny fotoana ny fotoana ary raha tsara vintana ianao, dia mety ho maro tsara tarehy ny filaminana mba hanome anareo orinasa
← Ny Fiarahana amin'ny aterineto ao Meksika, Mihaona ny olona tao
Nisy lahatsary iray avy amin'ny antoko ao Meksika izay olona nanitsaka ny fahafatesana soavaly - vaovao vavahadin-tserasera →